Hiran State - News: Wararkii ugu danbeyey madaxweynaha mustaqbalka umada Somaliyeed Prof Warfaa
Wararkii ugu danbeyey madaxweynaha mustaqbalka umada Somaliyeed Prof Warfaa
Isniin 28,Feb 2011 (HSOL)-madaxweynaha mustaqbalka umada Somaliyeed ninka bedelaya Madaxweyne Shiikh Shariif Prof Ahmed Muumin Warfaa ayaa maanta ka ambabaxaya magaalada Minneapolis isagoo ku siijeeda Kenya iyo Somaliya.
Prof Warfaa ayaa hada u muuqda shaqsi siweyn u kasbanayo qeybaha kala duwan ee umada Somaliyeed. kedib soo dhaweyn heersare aheyd oo ay u sameeyeen jaaliyada Somaliyeed ee Mankato ayaa galinkii hore ee maalintii shaleyto madaxweynaha mustaqbalka la keenay magaalada weyn ee Minneapolis, halkaasi oo uu kulamo kala duwan kula yeeshay qeybaha kala duwan ee shacabka Somaliyeed. HS.COM oo iyadu daqiiqad daqiiqad ula socoto safarada musharaxa ayaa isku dayo badan kedib ku guuleysatay iney hesho musharaxa.
Inkasta oo uu xiligaasi shir ku jiray hadane waxuu musharaxu inoo xajiiyey inuu maalinta Isniinta ah oo ku beegan maanta uu ka amaba baxayo magaalada Minneapolis isagoo ku sii jeeda dalkaasi Kenya kedibna Somaliya uga sii gudbi doono. sidoo kale Prof Warfaa ayaa u muuqday shaqsi kalsooni badan ka heystay qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed.
Intaasi kedib waxaanu xiriir la sameynay shirkada iyadu fududeysay dhaqdhaqaaqa madaxweynaha mustaqbalka Hiiraan Limo amaba shirkada leh garaawida raaxada ee lagu daabulo madaxda amaba dadka caanka ah Hiiraan Lumasiin.madaxa shirkada Mudane Mustaf Sabriye oo ku magac dheer Sabraa ayaa inoo xaqiijiyey in Somalida Minnesota ay soo xasuusiyeen xiligii uu tartanka ku jiray Obama oo ay iskood isku xilqaamayeen shacabku iyagoo ku dhawaaqayey ereyo ay ka mid yahiin Yes we can iyo wax la mid ah. halka hada Prof Warfaa loogu yeerayo meeshii uu tago madaxweynaha mustaqbalka Somaliya amaba ninka lagu wado inuu bedelo madaxweyne Shiikh Shariif.
Mid ka mid ah dadkii sida weyn uga ag dhawaa Professorka oo isaguna aanu la xariirnay ayaa inoo xaqiijiyey in madaxweynaha mustaqbalka uu shir ay albaabadu u xirnaayeen oo qaatay mudo 5 sacadood ah uu maalintii shaleyto aheyd Professor-ka Kula yeeshey Hotel Sharaton oo ku yaala bartamaha magaalada Minneapolis madax sar sare shirkaasi oo ka duwanaa sida la sheegay midkii ay Somalidu la yeelaneysay musharaxa.
Mar aanu xiriir dhinaca isgaarsiinta ah la yeelanay wadanka Kenyana waxey shacabku inoo xaqiijiyeen in ay halkaasi ka socoto soo dhaweynta madaxweynaha mustaqbalka Somaliya 2011.dhaqdhaqaaqan uu wado Prof Warfaa oo aysan wadin musharaxiinta kale ee isaga mustaqbalka la tartameyso ayaa dad badan shaki ku abuuray waxuuna u muuqdaa shaqsi hore u ogaa in aan xukumada hada jirto loogu dareyn amaba aan mudada loo kordhineyn taasi oo ay hada si rasmi ah loo xaqiijiyey. xukumada hada jirto waxey ku eg tahay bisha Augosto amaba bisha 8aad ee inagu soo aadan. mudadaasi oo dalka Somaliya dib loo soo dooranayo madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan dowladaasina aan loogu yeeri doonin kumeel gaar oo ay Somaliya noqondoonto wadan xor ah oo dowlad rasmi ah leh.
· admin on February 28 2011 11:52:48 · 0 Comments · 3435 Reads ·
14,633,903 unique visits